Fanohanana Manerantany Ho An’ny Akademika Thailandey Miisa Dimy Voampanga Ho Nandika Ny Fandrarana Ny Fivoriana Ara-politika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Aogositra 2017 5:08 GMT
Mpandray anjara tao amin'ny fihaonambe mihazona sora-baventy mivaky hoe ‘Tsy toby miaramila ny zaikaben'ny mpampianatra oniversite.’ Sary avy amin'ny Tambajotra Akademika Thailandey ho an'ny Zon'ny Sivily.
Manam-pahaizana sy mpikaroka an-jatony manerana izao tontolo izao no nanao sonia taratasy misokatra ho an'ny governemantan'i Thailandy mangataka ny fisintonana ireo fiampangana itoriana ny akademika miisa dimy ao an-toerana voaheloka noho ny fanitsakitsahana ny fandraràna ny fivoriana ara-politika.
Manamboninahitry ny tafika iray no nitory ity raharaha ity taorian'ny Fihaonambe Iraisampirenena momba ny Fikarohana Thailandey izay natao tao Chiang Mai, any avaratr'i Thailandy, tamin'ny 15 ka hatramin'ny 18 Jolay 2017. Nahasarika mpandray anjara miisa 1.224 tamin'ity taona ity ny fihaonambe izay fanao isa-telo taona, ary ampiantranoin'ireo Oniversite tao Thailandy, Aostralia, Shina, India, Holandy, ny Fanjakana Britanika ary Etazonia.
Niampanga ilay mpikarakara ny fihaonambe Dr. Chayan Vaddhanaphuti tamin'ny fanaovana fivoriambe ara-politika ny governemanta Thailandey rehefa nanao hetsi-panoherana ny sasany tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny alàlan'ny fihazonana sora-baventy mivaky hoe “Tsy toby miaramila ny zaikaben'ny mpampianatra oniversite .” Nanondro sy niampanga ireo akademika Pakawadee Veerapatpong, Chaipong Samnieng, Nontawat Machai, ary Thiramon Bua-ngam taorian'izay ny Kolonely Suebsakul Buarawong, lehiben'ny kaomandy lefitry ny vondrona Miaramila faha 33 ao Chiang Mai noho ny fandikana ny lalàna.
Naka ny fahefana tamin'ny taona 2014 ny tafika ao Thailandy ary mbola eo amin'ny fitondrana amin'ny alàlan'ny lalàm-panorenany izay nolaniany tamin'ny taona 2016. Nivoady hamerina indray ny fifidianana sy ny fitondrana sivily izy ireo taorian'ny fampiharana ny fanavaozana ara-politika. Nanomboka tamin'ny taona 2014, nifehy tanteraka tamin'ny fomba hentitra ny fampahalalam-baovao ny fitondrana miaramila ary nanery ireo mpanangom-baovao sasantsasany hanatrika ny fivoriana ” fanitsiana toe-tsaina” . Nandràra ny hetsi-panoherana sy ny fivoriana ara-politika izay ahitana ny olona miisa dimy na mihoatra ihany koa izy ireo tamin'ny alalan'ny Didy laharana faha No.3 / 2015 izay mbola manan-kery.
Tamin'ny fotoana nanoratana, manampahaizana miisa 418 no efa nanao sonia ny fanambarana izay milaza an'i Dr. Chayan Vaddhanaphuti ho “akademika tena hajaina fatratra eo anivon'ny Oniversite sy ny fiarahamonim-pirenena ary any amin'ny minisiteran'ny governemanta Thailandey”.
Ahitana fangatahana miisa telo ny fanambarana : ny “fisintonana avy hatrany ny fampiantsoana” an'ireo mpandray anjara tamin'ny fihaonambe miisa dimy; ny “fanohanana ireo akademika sy mpianatra amin'ny fitantanana ny fampianarana, ny fikarohana, ny fifanakalozan-kevitra sy ny adihevitra ampahibemaso, ao anatiny sy ivelan'ny Onivesite” ary ny “fanamaivanana ny famerana ny adihevitra misokatra sy malalaka amin'izay olana manery ny Thailandey amin'ny ankapobeny.”
Afisin'ny Fihaonambe Iraisampirenena faha 13 momba ny Fikarohana Thailandey, Chiang Mai, 2017
Mandritra izany fotoana izany, nanao sonia ny fanambarana mitovy tamin'izany ireo mpanatrika ny fihaonambe miisa 291 mitaky amin'ny governemanta mba hisintona ny fiampangana. Nanamarika ihany koa ny fanambarana fa “nahitana fandrahonana sy fahatongavan'ireo mpitandro ny filaminana nanao fanamiana sy tsy nanao fanamiana” tao amin'ny fihaonambe.
Araka ny fanambaràna iraisana izay navoakan'ny vondrona mpiaro zon'olombelona maromaro tao Azia Pasifika dia ny fanaraha-mason'ny tafika nandritra ny hetsika no nahatonga ireo mpandray anjara sasany tao amin'ny fihaonambe nilanja sora-baventy hanoherana izany:
Nanao izany ireo mpandray anjara tamin'ny fihaonambe izay voampanga tamin'ny filanjana sora-baventy mba handefasana hafatra ho an'ny miaramila sy ny polisy nanao fanamiana sivily tsy fantatra ka niditra tao amin'ny efitry ny fivoriambe ary tsy niraharaha ny fitsipika momba ny fihaonambe izay mitaky ny fanaovana mari-pamantarana anarana, niditra an-tsokosoko nihaino ny adihevitra, ary naka sary ireo olona tsy nahazoana alàlana avy amin'izy ireo .
Nilaza tamin'ny polisy i Dr. Chayan Vaddhanaphuti fa tsy tao anatin'ny fandaharam-potoanan'ny fihaonambe ny fihetsiketsehana. Nanamafy izy fa tsy voatery hahazo fankatoavana avy amin'ny miaramila ny mpikarakara ny fihaonambe noho ny hetsika tsy natao ho fivoriana ara-politika.
Nanakiana ny fanapahan-kevitra tamin'ny fanenjehana ny mpikarakara ny fihaonambe sy ireo mpandray anjara miisa efatra i Plönpote Atthakor, toniandahatsoratry ny gazety Bangkok Post:
Tsy vao izao no nahenoantsika ny fampitahorana ataon'ny fanjakana manoloana ireo manohana ny fahalalahana akademika sy ny fahalalaham-pitenenana. Ny endrika hanaovana izany fotsiny no mety ho hafa, kanefa ny tanjona dia mitovy ihany: ny hanapenam-bava ireo izay tsy mitovy hevitra aminy.
Mampanontany zavatra vitsivitsy izany na inona na inona antony: Ahoana no ahafahantsika manatanteraka ny fanavaozana raha mbola manenjika ireo miteny ny ahiahiny momba ny olan'ny vahoaka ho fahavalony ny fanjakana?
Hatraiza no ahafahantsika mandeha amin'io lalan'ny fanavaozana io raha mbola mampiasa ny rafitra rehetra izay azon'izy ireo hamehezana ny vahoaka ny manampahefana?
Namoaka fanambarana maneho ny fanohanany ireo akademika Thailandey miisa dimy ihany koa ny tambajotra iraisampirenena ho an'ireo Manam-pahaizana Tandindonin-doza.